त्रिवेणी विकास बैंकको १९ प्रतिशत बोनस
त्रिवेणी विकास बैंकको १९ प्रतिशत बोनस	By नवीन सन्देश on	२३ भाद्र २०७३, बिहीबार १३:२६
काठमाडौँ । त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको भदौ २२ मा बसेको संचालक समितिको बैठकले शेयरधनीहरुलाई १९ प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ।
उक्त लाभांश प्रस्ताव राष्ट्र बैंक र बैंकको साधारण सभाले पारित गरेपछि शेयरधनीहरुले बोनस शेयर पाउने छन। बैंकले बैंकले कर प्रयोजनका लागी रकम छुट्ट्याएको छैन। साविक त्रिवेणी विकास बैंक लि., ब्राइट डेभलपमेण्ट बैंक लि. र पब्लिक डेभलपमेण्ट बैंक लि. एक आपसमा गाभिई गत २०७२ जेठ १८ गते देखि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा कारोवार संचालन गदै आएको हो।
मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले २ बर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था अनुसार बैंकले बोनस शेयरमा कर प्रयोजन बापत रकम नछुट्याएको जनाएको छ। हाल बैंकको चुक्ता पुंजी ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने बैंकको प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। २०७२ जेठ २८ देखि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा कारोबार सुरु गरेको त्रिबेणी विकास बैंकले आगामी असार मसान्त २०७४ भित्र चुक्ता पुंजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने छ।
बैंकले गत आर्थिक बर्षमा १८ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो। यस अवधिमा बैंकले ९ अर्व ११ करोड कुल निक्षेप गरि ७ अर्व २९ करोड कुल कर्जा लगानी गरेको छ। त्यस्तै यस अवधिमा कुल संचालन मुनाफा ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।